Chakras 7: Inona ireo Chakras - - Hevitry Ny Tandindona
Chakras 7: Inona ireo Chakras
Ao amin'ny Fomban-drazana hindoa ny Chakra dia ivontoerana angovo hita ao amin'ny vatana misoko mangina (mifanohitra amin'ny fisian'ny vatana).
Ireo fantsona angovo ireo dia mitondra hery velona (antsoina koa hoe Prana) manerana ny vatana.
Misy fiantraikany amin'ny fomba ananan'ny olona iray koa izy ireo Hanana miseho.
Mikorisa ambany ary kitiho ny chakra tianao hianaranao. Mandrosoa ihany koa na tsindrio raha te hahalala bebe kokoa momba ny inona ilay Chakra 7 dia sy ny fomba 'fiasan'izy ireo'.
Famantarana sy dikan'ny chakra faka
Symbolism sy dikany amin'ny sakramenta sakral
Solar Plexus Chakra Symbolism sy dikany
Symbolisma sy hevitry ny chakra amin'ny fo
Tandindon'ny Chakra sy heviny
Tandindona sy hevitry ny chakra satro-boninahitra
Hevitry ny Chakras 7 manerana an'izao tontolo izao
Ny teny Chakra dia avy amin'ny a Teny sanskrit izay midika hoe vortex . Misy manam-pahaizana milaza amintsika koa fa ny dikan'io dia kodiarana. Izany dia satria ny Chakras dia mihodinkodina amin'ny famantaranandro.
Na dia be aza ny ivon-kery kely eto amin'ny vatantsika dia misy ihany Chakras lehibe 7 izay ifantohan'ny ankamaroan'ny asa soratra.
Vakio daholo ny Simbolo sy loko 7 chakra ...
Ny mpiasa maivana dia milaza amintsika fa manodidina ny 4 'eo ambonin'ny vatana ara-batana izy ireo avy amin'ny toerana misy ny fitaoman'izy ireo amin'ny tambajotra feno neural. Izany no antony ampiasain'ny akupungture ny toerana Chakra ho toy ny teboka fanombohana ny vatan'ny meridian'ny vatana.
Ny mpandahateny sasany dia miresaka momba ny Chakras roa manan-danja iray hafa izay eo ambonin'ny lohantsika ihany satria misy ifandraisany amin'ny Masina ary ny iray kosa mankany amin'ny mandrakizay izay voatazona hatramin'ny faha-8 amin'ny tadin'ny angovo
Saika ny mpampianatra sy ny sekoly rehetra miresaka momba an'i Chakras dia samy manana ny fomba fiasa sy ny filozofia momba ireo ivon-angovo ireo. Noho izany, zava-dehibe ny mieritreritra ny dikan'ny Chakra aminao alohan'ny itadiavana mpitari-dalana.
Amin'ny fomban-drazana bodista ny rafitra Chakra dia zava-dehibe amin'ny dingan'ny fanahy. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny rafitra Chakra dia miezaka ny olona iray hahatratra ny habaky ny fahabangana tanteraka ilaina amin'ny Buddhahood.
Amin'ny fomban-drazana New Age izany dia nadika tamin'ny fomba fanao amin'ny fisaintsainana isan-karazany izay mifantoka amin'ny famporisihana Chakra iray manokana na ireo Chakra rehetra miaraka amin'ny tanjona faratampon'ny fahazavana.
Amin'ny ideolojia Himalaya Misy fiantraikany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fisian'ny olombelona ny chakras. Ny finoana dia na inona na inona ny toetran'ny Chakra dia misy foana ny fifamatorana amin'ireo ivon-angovo hafa - fatorana izay mijanona ihany rehefa lany ny fiainana.
Eto dia ampitovin'ireo mpikarakara ny Chakra amin'ny kabinetra fametrahana izany. Na dia maneho zavatra manokana amin'ny fizahana ivelany aza ny tsirairay, dia mahita bebe kokoa ianao rehefa manokatra ny vatasarihana! Amin'ity fomba ity Chakras dia multi-dimensional ary manolotra varavarana mankamin'ny fahitana ara-panahy saika tsy misy fetra ao anatin'izany ny firaketana Akashic manokana.
Kolontsaina tandrefana dia tsy nisy foto-kevitra momba ny foibem-panahy. Na izany aza, ny tena foto-kevitr'i Chakras dia tsy nampidirina hatramin'ny faran'ny taona 1920 tao amin'ny boky iray tena sarotra antsoina hoe The Serpent Power nataon'i Sir John Woodroffe. Ity tome ity dia nampahafantatra ireo Chakras manan-danja 7 izay lasa ivon'ny ideolojia andrefana momba an'io lohahevitra io.
Avy amin'ny a Fomba fijery New Age ny Chakras dia tsy mametraka angona ara-panahy fotsiny fa koa miasa ho foibem-pahatsiarovana, mandrakitra ny fotoana rehetra amin'ny fiainanao. Mitovy amin'ny fahatsiarovan'ny sela, tsy misy very - sarotra indraindray ny miditra.
Ny chakras dia nofaritana ho manana loko manokana mifandraika. Izany dia noho ny hafainganam-pandehan-javatra izay iasan'izy ireo. Raha manomboka mieritreritra loko amin'ny olona ianao Hanana SY Tandindon'ny loko , eo amin'ny lala-mahitsy ianao!
Ireo rehetra ireo dia mifamatotra, mamorona lamina ara-panahy tsy manam-paharoa amin'ny tsirairay.
Vakio ny filazalazana feno momba ny Chakra Colours & Chakra Symbols !
Fanadiovana, fampifandanjana ary fanasitranana ny chakra
Toy ny amin'ny auras, raha ny fotaka iray feno fotaka na maloka izay manondro olana izay mety hidina lalina ka hampihemotra na hanakana ny fizotran'ny fihodinana.
Ny chakra tsirairay dia mifehy ny taova sy ny fihary lehibe. Nametraka tsipika manaraka ny tsanganana hazondamosina izy ireo. Ireo koa dia misy fiantraikany amin'ny fihetsem-pontsika ary na dia ny fomba fahitantsika an'izao tontolo izao aza.
Rehefa tsy mahay mandanjalanja ny Chakra iray na maromaro ary mijanona toy izany dia mety hisy fiantraikany amin'ny Chakras mpifanila vodirindrina aminy. Na eo ambanin'ny mavitrika, voasakana, voasakana na mavitrika ny valiny matetika dia miseho tsy amin'ny vatantsika ihany fa amin'ny saina sy fanahy.
Ny mari-pamantarana voalohany indrindra momba ny olan'ny Chakra dia ny fihenan'ny herin'ny tena manokana, ny fahaketrahana, ny tsy fahafaham-po ary ny fahatsapana fa misy zavatra 'miala'. Mifanohitra amin'izany rehefa miasa miaraka ny rafitra Chakra anao dia mihatsara ny angovo toa ny fihetsikao.
Toy ny zavamananaina hafa, ny biby dia manana rafitra Chakra ary ny mahasamihafa azy dia ny fivoarana amin'ny haavony avo kokoa.
Miovaova arakaraka ny fomban'ny zavaboary ny firaketan'izy ireo ny chakras, saingy amin'ny ankapobeny dia manaraka ny tsanganana hazondamosina toy ny ivon-toeran'olombelona.
Ny biby koa dia manana Chakras manokana tsy manam-paharoa amin'ny fisiolojika.
Ohatra, Bud Chakras dia misy amin'ireo biby misy tongotra na hoofs (mitovy amin'ireo Chakras olombelona tsy ampy taona eo an-tongotsika - manontany tena raha mahasintona izy ireo?). Ity no faritra mahatsapa loza ary koa manome ny zavaboary manana fiorenan'ny tany (ianareo miaraka amin'ny alika hyper dia mety hampifantoka ny asan'ny angovo amin'ny tongony).
Rehefa miasa miaraka amin'ny biby ianao amin'ny fanasitranana Chakra amin'ny ankapobeny na mampifandanja ny biby fiompinao, dia manampy amin'ny fanomanana azy ireo mialoha ny fotoana. Manotra moramora ny sofiny ary miteny amin'ny feo mangina sy mampitony. Izany dia manampy amin'ny famolavolana ny aura miaraka amin'ny azy ireo amin'ny fomba fiaraha-miasa.
manao ahoana ny rafitry ny masoandro amin'izao fotoana izao
Atombohy amin'ny Base Chakra ary miasà amin'ny fomba fitandremana manokana ireo ivon-toerana tsy mahatsiaro tena. Ny olana ara-batana mifandraika amin'ny Cnimal Chakras dia mitovy amin'ny an'ny olombelona, ​​mba hahafahanao mampiasa ireo fifandraisana ireo miaraka amin'ny fahatsapanao manokana ho toy ny tari-dàlana. Matokia anay, TIA ny sain'ny biby fiompinao.
Mariho fa ny fahatsapana sasany izay miara-miasa matetika amin'ny biby dia milaza fa manana Chakra lehibe faha-8 antsoina hoe Chakra Brachial izy ireo. Ity faritra ity dia mihetsika toy ny ivon-toeran'ny ivon-toeran'ny angovo 7 hafa. Izy io koa dia mifehy ny fifandraisan'ny olombelona sy ny biby.
Any amin'ny faritry ny soroky ny biby no misy azy. Rehefa mikatona ny Chakra Brachial na mikatona ny biby lasa mailo be amin'ny fikasihana, manana olana amin'ny tompony na mety hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra.
Ho anao izay tsy mahatsapa ny angovo Chakra amin'ny laoniny dia manana safidy hafa ianao. Ny tsorakazo na pendulo dia afaka manampy anao hahita olana.
raha izahay tena TSY, TSY, TSY nanolo-kevitra izany ho solon'ny fitsaboana veterinera matihanina io no fomba tsara indrindra hifamatorana lalindalina kokoa sy amin'ny alàlan'ny biby fiompy, indrindra raha totem na mahazatra anao izany.
dikany ara-panahy ny loko mena
gemini lehilahy libra vehivavy eo am-pandriana
lehilahy virtoaly tia vehivavy scorpio